Do not take off your face mask just yet | Safety
Vaovao momba ny fiaramanidina • Vaovaon'ny seranam-piaramanidina • Vaovao momba ny fiaramanidina • Raharaham-panjakana • Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena • Other • fanarenana ny dia • Safety • Vaovao momba ny fizahantany • Dinika fizahan-tany • Vaovao momba ny fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Tsiambaratelo momba ny dia • Vaovao mivalona • News News
Home » Lahatsoratra » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Aza esorina aloha ny saron-tava » Page 2
Raha manitatra ny datin'ny fampiharana ity fanambarana ity, ny lafiny hafa rehetra amin'ny fitakiana dia mijanona tsy miova, ao anatin'izany ny fanavotana sy ny sazy sivily. Fanafahana ny takiana amin'ny saron-tava ho an'ireo mpandeha latsaky ny 2 taona sy izay manana fahasembanana sasany dia hitohy. Ny rafitra lamandy fanasaziana sivily efa misy ihany koa dia hijanona eo amin'ny toerany izay manomboka amin'ny $ 250 ary tafakatra hatramin'ny $ 1,500 ho an'ireo mpandika lalàna miverimberina izay mandika io takiana saron-tarehy io.
Ireo mpandeha izay tsy nandeha fiaramanidina hatramin'ny taona lasa dia mety mahatsikaritra fanovana maro samihafa izay efa napetraka tamin'ny toeram-pisavana ny seranam-piaramanidina manerana ny firenena.
Ao amin'ny toeram-pisavana TSA, ny mpitsangatsangana dia hanohy hahita ireo mpiambina ny fisavana rehetra mitafy masom-basy sy fonon-tànana. Ny sakana akrilika dia mijanona eo amin'ny ankamaroan'ny seranam-piaramanidina raha toa kosa ny haitao vaovao fanamarinana fanamarinana vaovao sy ireo fitaovana fananganana tomografika amin'ny toeram-pisavana an-jatony dia mampihena ny filàna fifandraisana ara-batana eo amin'ireo tompon'andraikitra sy ny vahoaka mpanao dia lavitra.
Ny tompon'andraikitra misahana ny fizahana TSA ao amin'ny tobin'ny fizahana fizahana taratasy momba ny dia (TDC) dia hangataka ny hampietren'ireo mpandeha vonjimaika ny saron-tava mba hanamarinana ny mombamomba azy ireo. Ireo izay manatona ny TDC tsy misy sarontava tarehy dia angatahina haka iray hanohizana. Ireo mpandeha izay mandà tsy hisaron-tava dia tsy avela hiditra amin'ny faritra azo antoka amin'ny seranam-piaramanidina, izay misy ny faritry ny terminal sy ny vavahady. Kaontenera iray manadio tanana hatramin'ny 12 oz. ny olona iray dia mbola avela alefa vonjimaika ao anaty kitapo entina mitondra entana, raha toa kosa ny ranoka, gel ary aerosol hafa rehetra dia tsy maintsy mihaona ny Fitsipika 3-1-1.
Ireo mpandeha manana fanontaniana momba ny fomba fitiliana ny fiarovana ny seranam-piaramanidina dia mety handefa hafatra amin'ny alàlan'ny Facebook na Twitter any @AskTSA mba hahazo fanampiana mivantana manomboka amin'ny 8 maraina ka hatramin'ny 8 hariva ET amin'ny andro fiasana na 9 maraina ka hatramin'ny 7 hariva ET amin'ny faran'ny herinandro / fialantsasatra. Ireo olona izay mila fanampiana amin'ny fisavana noho ny fahasembanana, ny toe-pahasalamana na ny toe-javatra manokana hafa dia mety hifandray TSA Cares farafahakeliny 72 ora mialoha ny sidina ataon'izy ireo amin'ny fiantsoana (855) 787-2227.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny Security Directives and Emergency Amendment, fitsidihana tsa.gov/sd-and-ea. Raha mila fampahalalana fanampiny momba ny fomba fiasa TSA mandritra ny areti-mandringana COVID-19 ao anatin'ny "Mijanona ho Salama. Mijanona ho Milamina. ” fanentanana ho an'ny daholobe, fitsidihana tsa.gov/coronavirus.